နေအိမ် / Archives for Arbitration Damages
နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်အတွက်ယာယီဆောင်ရွက်ချက်များ - အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိသူတို့က binding နှင့်ဘက်တော်သားနေ?
22/12/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိအတွက်ကြားဖြတ်အစိုးရသို့မဟုတ်ယာယီအစီအမံပေးရန်ခုံသမာဓိခုံရုံး၏အခွင့်အာဏာ uncontested ယနေ့နှင့်လက်ရှိအလေ့အကျင့်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်. ဤ "မွေးရာပါနျခိုးတျော" ခုံသမာဓိခုံရုံး၏မျိုးစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိတူရိယာထဲမှာဝိုငျးဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအပိုဒ်အဖြစ် 47 အဆိုပါ ICSID ကွန်ဗင်းရှင်း၏, ဆောင်းပါး 39 အဆိုပါ ICSID အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ၏, ဆောင်းပါး 26 အဆိုပါ UNCITRAL အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများနှင့်အပိုဒ်၏ 1134 ၏ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ICSID အနုညာတစီရင်
အရောင်းကိုယ်စားလှယ် (အီရတ်) v. ထုတ်လုပ်သူ (ပြင်သစ်), ICC ကဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ. 16684, ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့် (2012)
ဤသည် ICC ကခုံသမာဓိဆု estoppel ၏အယူအဆနှင့်ပါတီများအကြားတစ်ဦးကိုယ်စားပြုမှုသဘောတူညီချက်စိုးရိမ်, နှင့်စာချုပ်ကုလသမဂ္ဂပိတ်ဆို့မှုရှိနေသော်လည်းတရားဝင်နှင့်အတည်ပြုခဲ့ရှိမရှိ, ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေအရစာချုပ်ရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ. စာချုပ်ဖျော်ဖြေနေချိန်မှာပဲ, တစ်ဦးအီရတ်ပိတ်ဆို့မှုကျူးကျော်အောက်ပါကုလသမဂ္ဂကအမိန့်ထုတ်ခဲ့သည် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, အီရတ်အနုညာတစီရင်, ကူဝိတ်အနုညာတစီရင်, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်
BG Group PLC. V ကို. အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ - ပြဿနာ NO. U.S. 12-138 (2014) – U.S. နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်
20/05/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဒီအငြင်းပွားမှုအတွက်, အဆိုပါတောင်းဆိုသူ MetroGas အတွက်အများစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, Buenos Aires ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့များဖြန့်ဖြူးဘို့. အဆိုပါခင်မှာ 2001 ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း, အာဂျင်တီးနားဥပဒဓာတ်ငွေ့အခွန်အမြတ်အစွန်းပြန်များအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ပေးအပ်. သို့သျောလညျး, အကျပ်အတည်းအရေးပေါ်အစီအမံမှဦးဆောင်, တစ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတစျခု […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အာဂျင်တီးနားအနုညာတစီရင်, နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်, ကိုလံဘီယာအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, UNCITRAL အနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်
Irreparable ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ: ENCANA Corps. v. အီကွေဒေါသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ (LCIA, ကြားဖြတ်အစိုးရဆုချီးမြှင့်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များဘို့တောင်းဆိုခြင်း – 2004)
27/04/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
လူသိများတဲ့ကိစ္စတွင် Encana v ခုနှစ်တွင်. အီကွေဒေါနိုင်ငံ, အနုညာတခုံရုံးမရှိ irreparable ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခြင်း၏အခြေခံပေါ်မှာကြားဖြတ်အစိုးရအတိုင်းအတာအမိန့်ပေးဖို့ငြင်းဆန်. ဇန်နဝါရီလတွင် 8, 2004, တောင်းဆိုသူကအီကှဒေါအစိုးရသည်၎င်း၏တစ်ဦးအရေးယူခဲ့ကွောငျးအခြို့သောအစီအမံများပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းကြားဖြတ်အစိုးရကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်လျှောက်လွှာများအရေးပေါ်ကြားနာမေတ္တာရပ်ခံ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အီကွေဒေါအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်
ဖောက်သည် (အီတလီ) v. service provider (ဆွစ်ဇာလန်), ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်သည် CAM ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ. 1115/16, 10 ဒီဇင်ဘာလ 2015
23/04/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဤကိစ္စတွင်အနုညာတစီရင်၏မီလန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါတီနှစ်ခုအကြားစာချုပ်များ၏တရားဝင်မှု၏ပြဿနာမှပြောပြတယ်. အဆိုပါအမှု၌, အဆိုပါတောင်းဆိုသူ၏ရပ်စဲဘို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှာကြံမီလန်အတွက်အနုညာတစီရင်၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမတိုင်မီခုံသမာဓိများအတွက်တောင်းဆိုချက်အတွက်တင်သွင်း […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး, အီတလီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်